မရွယ်ပဲ ဆူး မင်းဖြစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မရွယ်ပဲ ဆူး မင်းဖြစ်
Posted by မောင် ပေ on Jul 13, 2011 in Creative Writing, Short Story | 14 comments
ဆူး လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ထားလို့gazette ရှိ စာရေးဆရာမ ဆူး လို့ မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး ။ အချိန်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်လောက် ကပါ ။ မမ ဟာ မိုးကုတ် နဲ့ မန်းတလေး ကျောက်ကုန်ကူး နေတဲ့ အသက် ၃၅ ၀န်းကျင် ခန့် ရှိ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ အသက် ၃၅ နှစ် ဆိုပေမယ့် သူမ ဘော်ဒီ က တော့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး နန္ဒာလှိုင် လို မျိုး ။ ရှမ်းတရုတ် စပ်သည့် အတွက် သူမ အသားက ဖြူသည် ။ သူမ ဟာ ကျောက်ကြည့်ရာ မှ ကျွမ်းကျင် သလို ယောက်ျားများ နှင့် ဆက်ဆံရာမှာလည်း ကျွမ်းကျင် မှု ရှိပါတယ် ။ ရံဖန် ရံခါ ဆိုလျှင် ကျောက်သူဌေးများနှင့် နှစ်ကိုယ်တူ ခရီးရက်ရှည် ထွက်လေ့ ရှိသူ တစ်ယောက်ပါ ။ (ယနေ့ ခေတ် စကား အရ ကက လို့ ဆိုရမှာပေါ့ နော် ) မောင်မောင် က တော့ အသက် ၁၆ နှစ်ခန့်၁၀ တန်းကျောင်းသား တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။
မမ နဲ့ မောင်မောင် တွေ့ ဆုံ မှုဟာ မောင်မောင် တို့ ကျူရှင်ဝိုင်းနေရာ မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ် ။ မောင်မောင် တို့စာသင်တဲ့ ၀ိုင်းနေရာဟာ ၃ ထပ် အဆောက်အဦးပါ ။ မြေညီထပ် နဲ့ ပထမ ထပ် ကို တည်းခိုခန်း အဖြစ်ဖွင့်ထားပါတယ် ။ အဲဒီ တည်းခိုခန်းဟာ ဈေးနှုန်းသက်သာ ၊ သန့် ရှင်း သပ်ရပ် တဲ့ အတွက် ကျောက်ပွဲစားများ ( အထူးသဖြင့် ကျောက်ကုန်သည် ၊ ကျောက်ပွဲစား အမျိုးသမီးများ ) အမြဲလို လာရောက် တည်းခိုလေ့ ရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ ။ မောင်မောင် တို့ စာသင်ဝိုင်း က တော့ ဒုတိယ ထပ် ရှိ ဟောလ်ခန်း ထဲ မှာပါ ။ တည်းခိုခန်း နာမည် က နေကြာ လို့ ဆိုပါစို့။ နေကြာ တည်းခို ခန်း ဟာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အောက်ကြေး တည်းခိုခန်းပေါ့ ။ အောက်ကြေးလို့ ဆိုတာ က တည်းခိုခ နည်း တာ ကိုပါ ။ -ာ များ မရှိ ပါ ၊ လက်မခံ ပါ ၊ အလွန် သန့် ရှင်း သပ်ရပ် ပါတယ် ။ တစ်ခု ပြောစရာ ရှိတာက တစ်ထပ် မှာ ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ၁ ခု စီပဲ ရှိတာပါ ။ တည်းခိုရာ အခန်းတွေ မှာ ရေချိုးခန်း အိမ်သာ မပါ ပါဘူး ။ တည်းခိုသူ တွေ နဲ့နေကြာမှာ နေသူ တွေ ရေချိုးခန်း ၀င်ချင်ရင် ၊ အိမ်သာ သုံး ချင် ရင် နားလည်မှု နဲ့ သုံးကြ ရပါတယ် ။ စာသင်ဝိုင်းမှာ ကျောင်းနေကျောင်းစား အချို့ ရှိပါတယ် ။ သူတို့ ဟာ ဒုတိယ ထပ်မှာ သီးသန့် အခန်း ယူ နေကြပါတယ် ။ စာသင်ချိန် အပြီး ဆို ရင် နေကြာ တည်းခိုခန်း ဟာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များ ၊ တည်းခိုသူ များနဲ့ စည်ကားလေ့ ရှိပါတယ် ။ နေကြာ တည်းခိုခန်း မန်နေဂျာ ဟာ လည်း လူငယ် တစ်ဦးပါ ။ အတန်းပညာတော့ မသင်ခဲ့ရာရှာ ။
မောင်မောင် တို့ ကျောင်းသား ( အမျိုးသားများ ) တစ်စု ကို မန်နေဂျာ က သူ့ အတွေ့ အကြုံ များ ကို အမြဲ ပြောပြလေ့ ရှိပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် မိန်းမ များနှင့် ပတ်သက်ပြီးပေါ့ ။ မောင်မောင် တို့ အနေ နဲ့ က တော့ ဘာမှ မသိကြသူ များ ဖြစ်လို့ မန်နေဂျာ ပြောသမျှ ဟုတ်သလိုလို ထင်မှတ် ခဲ့ကြရပါတယ် ။ မန်နေဂျာ ကိုကို ရဲ့ အာဘော် များအရ ဆိုရင်
` အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဟာ အပျိုစစ်မယ် ဆိုရင် သူမရဲ့ ကာတစ် (တင်ပါး) ဟာ နိမ့်တုံ မြင့်တုံ ရှိရမယ် ၊ အပျို မဟုတ်ခဲ့ ရင် သူမ ရဲ့ ကာတစ် ဟာ ရမ်းခါ နေမယ် ´ လို့ မောင်မောင် တို့ သိရှိခဲ့ရပါတယ် ။ ထို့ အပြင် အသားဖြူ တဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုရင် ကာမ က ဘယ်လို ၊ အသားညို တဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုရင် ကာမ က ဘယ်လို ၊ အသား မဲတဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုရင် ကာမ က ဘယ်လို အစရှိသဖြင့် ကောလဟာလ လိုလို ညစ်တီးညစ်ပတ် များ ကို လည်း ကြားသိရပါတယ် ။ ( ရွှဲ ၊ တွဲ ၊ နှုတ်မရ ) ။ စကားစကား ကြားပါများ တော့ ၁၆ နှစ် အရွယ် မောင်မောင် ဟာ သူ့ အတွက် အတွေ့ အကြုံ အသစ် တစ်ရပ် ကို လက်တွေ့ စမ်းသပ် ချင်စိတ်များ ပေါက် လာခဲ့တယ် ။ အဆိုပါ အချိန် မှာ ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလား မသိ ။ မိုးကုတ်က ကျောက်ပွဲစား မမ ဆိုသူ တစ်ယောက် မောင်မောင် တို့ ရှိရာ နေကြာ တည်းခို ခန်း သို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ။ မန်နေဂျာ ကိုကို ကတော့ မမ ရဲ့ သမိုင်းကို အနည်းငယ် ကြားဖူး သဖြင့် တစ်ယောက်ထဲ တည်းမယ် ဆိုရင် အခန်းတွင်းသို့ပြင်ပ ဧည့်သည် ခေါ်ယူခွင့် မရှိကြောင်း ရှင်းပြပါတယ် ။ မမ က လည်း လက်ခံ ပြီး နေကြာ တည်းခိုခန်း မှာ အခန်း တစ်ခု ယူ လိုက်ပါတယ် ။ တစ်ခု ရှိတာ က မမ ရဲ့ ကာတစ် ဟာ နိမ့်တုံ မြင့်တုံ ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နေကြာ ရှိ ဘယ်အမျိုးသား က မှ သူမ ကို အပျိုစင်စစ် ဟု လက်မခံကြပါ ။
မောင်မောင် တို့ ကျောင်းသား တစ်သိုက် ကတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စာသင်လိုက် ၊ ကျောင်းသား အချင်းချင်း နောက်ပြောင် ဆော့ကစားလိုက် ၊ ကျောင်းသူ များ ကို မထိခလုတ် ၊ ထိခလုတ် လိုက်လံ စလိုက် နဲ့ ပေါ့ ။တစ်ခု ရှိတာက မောင်မောင် တို့ စာသင်ချိန် ပြီးလို့ မြေညီထပ် တည်းခိုခန်း reception မှာ ကူထိုင်ပေးပြီ ဆိုရင် မမ တစ်ယောက် ဟာ reception ရှေ့ မှာ လက်ယားလက်ယား လာလုပ် နေခြင်းပါ ။ မောင်မောင် တို့ အဖွဲ့ ဟာ လူပျိုပေါက် လေးတွေ ဆိုတော့ မမ ကို တွေ ရပြီး နောက်ပိုင်း တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် စကြတာပေါ့ ။ ` အဲ့ဆော်ကြီး က တော့ ဇါတ်လမ်း လာလုပ်နေပြီ ၊ မင်း ကို ´ ….။ ` ငါ့ ကို မဟုတ်ဘူး …၊ မင်းကို လုပ်တာ ´ စသည်ဖြင့် ၊ အချင်းချင်း စ လိုက် နောက်လိုက် နဲ့ ပေါ့ ။
တစ်ရက် ကြ တော့ မောင်မောင် ကျောင်းမှ အပြန် ရေချိုး ရန် ပထမ ထပ် ရှိ ရေချိုးခန်း မှာ မအားသေးသဖြင့် ၊ မြေညီထပ် သို့ ဆင်းလာခဲ့ပါတယ် ။ မြေညီထပ် အရောက် ရေချိုးခန်း ကို ကြည့်ရာ တံခါးက ဟစိ လေး ။ ဒါနဲ့မောင်မောင် လည်း လူရှင်းတယ် မှတ်ပြီး အခန်းတံခါး ဖွင့် ၀င် လိုက်တော့ အခန်းထဲ မှာ ရှိနေတာ က မမ ။ ထဘီ ရင်ရှားကြီး နဲ့ ( ရေစိုလျှက် ) အ၀တ်လျှော် နေပါတယ် ။ မောင်မောင် လည်း မျက်လုံးမျက်ဆံ ပြူး သွား ပြီး ကမန်းကတမ်း တောင်းပန် စကား ဆိုကာ ပြန်အထွက် မမ က စကား ဆိုလာပါတယ် ။
` မောင်လေး ရေချိုး မလို့ လား ၊ ခဏလေး ပဲ စောင့် ၊ မ …. ဒါလေး လျှော်ပြီးရင် ပြီးပါပြီ ။ ´
` အော်…ဟုတ်..ဟုတ် ။ ဒါဆိုလည်း ကျွန်တော် အပြင်ကပဲ စောင့်နေလိုက်မယ်နော် ´
` အထဲမှာ ရပ်စောင့် လည်း မင်းကို ဘယ်သူ မှ တရားမစွဲပါဘူး ကွယ် ၊ ဒါနဲ့မောင်လေး…စာတွေ လိုက်နိုင်ရဲ့ လား ၊ မေးမယ့်သာ မေးရတာပါ ၊ ငါ့မောင်က တော်ပြီးသား ပါ ´
` ဟုတ် စာက ရပါတယ် ´
` ဒါဆို ဘာ က မရတာလည်း ၊ မောင်လေး လိုတာ မမ ကို ပြောပြလေ ၊ မမ တတ်နိုင်တာ ရှိရင် အကုန်ကူညီပေးမှာပေါ့ ကွာ ။ မောင်နှမ တွေ ပဲ…ဟင်းဟင်း ´
` အာ….ရပါတယ် မမ ၊ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး မလိုပါဘူး ၊ မောင်လေး အပြင်ကပဲ စောင့်နေလိုက်မယ်နော် ၊ မမ ပြီးရင် ခေါ်လိုက်ပေါ့ ´
` အမလေး..လေး ၊ ငါ့မောင် နှယ် ကိုယ့်အမ နဲ့ စကားပြောရတာလေးကို ရှက်နေလိုက်တာ ။ လာလာ… မမ လည်း ပြီးပြီ ၊ ငါ့မောင် ရေချိုးတော့ ၊ မြန်မြန်လည်း ချိုးဦး ၊ တော်ကြာ အအေးပက်နေဦးမယ် ´
` ဟုတ်ကဲ့…. ´ ပြောရင်း ရေချိုးခန်း ထဲ မှ ထဘီ ရင်လျား ဖြင့် ထွက်သွားသူ မမ ၏ နောက်ပိုင်း ကို မောင်မောင် စိုက်ကြည့်နေမိသည် ။ ` တင်ပါးကတော့ ဂျာကြီးတို့ ပြောတဲ့ ဆိုရိုး အရ အမှန် ပဲ ၊ အေးလေ သူ့ အရွယ်နဲ့ ဆို ဒီလောက်တော့ ရှိရောပေါ့ ´ ဟု မန်နေဂျာ ကိုကို ၏ စကားအရ မောင်မောင့် မသိစိတ်က မှတ်ချက်ပေးနေမိသည် ။
မောင်မောင် တစ်ယောက် ရေချိုးရင်း စိတ်ကူးတွေ ယဉ်နေမိသည် ။ ` အင်း ဒီဆော်ကြီး ( ဆော်ကြီး = ခေတ်စကား ) ရိုးတော့ မရိုးဘူး ၊ ငါ့ကို အထာတွေ များ ပေးနေတာလား မသိဘူး ။ အင်း…ဆော်ကြီး ကြည့်ရတာ လန်းတယ် ။ ဒါပေမယ့် ငါ့လို ကလေးသာသာ မျိုးနဲ့ မဖြစ်လောက်ပါဘူး လေ ။ ဒီအကြောင်း ကို ဘယ်သူ နဲ့ တိုင်ပင် ရမှာပါလိမ့် ၊ ရှုပ်ပါတယ် ငါ့ဟာငါပဲ နေတာ ကောင်းပါတယ် ´
သို့ နှင့် မောင်မောင် နှင့် မမ ရေချိုးခန်း တွင် ဆုံဖြစ်ခဲ့သည် ကို ကျူရှင် ၀ိုင်းရှိ ကျောင်းသား များ အားလုံး သိသွားကြသည် ။ သတင်းဖွ သူ က မန်နေဂျာ ကိုကို ။ မောင်မောင့် သူငယ်ချင်း အားလုံး က မောင်မောင် ထံ လာပြီး အားမလိုအားမရ ၀ိုင်းပြောကြကုန်သည် ။
` မင်း ဘာလုပ် လိုက်သေး လဲ ´
` ဟ…သောက်နွားရ ၊ ငါ့ဟာငါ ရေချိုးတာပေါ့ ၊ ဘာလုပ် ရမှာလဲ ´
` မင်းနှယ်ကွာ…. နေရာချင်း လဲလို့ ရရင် လဲ လိုက်ချင်တယ် ။ ဟင်းးးးနော်… ´
` အာ…မလုပ်ပါနဲ့ ကွာ ၊ အေးဆေး စာကျက်ပါရစေ ´
` မင်းကွာ ၊ ဂျာကြီး ပြောတာတွေ လည်း မင်း အသိပဲဟာ ၊ ဆော်ကြီး က အခုလောလောဆယ် ဘဲ( ခေတ်စကား အရ ဘဲ= ယောက်ျား ကိုယ်စားပြု ) လို နေတာ မင်းသိနေတာပဲ ၊ မင်းကို အထာတွေ ပေးနေတာလဲ အားလုံး သိတယ် ၊ မင်းကွာ ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်လျှင် ငမိုက်နင့်ပြင် ရှိဦးမလား ဆိုတဲ့ ကဗျာ ကို မေ့နေပြီလား ´
` ထားပါကွာ ။ နောက်တစ်ခါ ပေါ့ ´
` အေး ၊ နောက်တစ်ခါ ထပ်ကြုံခဲ့ရင် ၊ မင်း သတင်းကောင်း ပဲ ငါတို့ ကြားချင်တယ် ငါ့ကောင် ´ …။ မောင်မောင့် သူငယ်ချင်းများ က လည်း ပို့ သည် ။ ပင့်သည် ။ ချာတိတ်များ အနေဖြင့်လည်း မောင်မောင့် ကို အားကျ ကြသည် ။ ဆိုရလျှင် သူတို့ ခဗျာ လည်း နှုတ်စကား ဖြင့်သာ ပြောဆို နိုင်ကြတာကိုး ။ လက်တွေ့ အတွေ့ အကြုံ ယူဖို့ ရန်လည်း မောင်မောင် က သူတို့ ထက် အခွင့်အရေး ပိုသာနေသဖြင့် မောင်မောင့်ကိုသာ ၀ိုင်းမြှောက်ပေးကြလေသည် ။
နောက်ပိုင်း တွင် မမ က သိသိသာသာ သော်လည်းကောင်း ၊ မသိမသာ သော်လည်းကောင်း မောင်မောင့် ကို ပေါ်တင် ၀င်ရောတော့သည် ။ မောင်မောင့် ခဗျာ လည်း စာကျက်လိုက် မမ အကြောင်း စဉ်းစား လိုက်ဖြင့် ။သို့ ဖြင့် သီတင်းကျွတ် ကျောင်းပိတ်ရက် အလို ၂ရက် သို့ ရောက်လာသည် ။
ကျူရှင် အဆင်း မောင်မောင် တစ်ယောက် သီတင်းကျွတ် ကျောင်းပိတ်ရက် အိမ်ပြန်ရန် အထုပ်အပိုး များ ပြင်ဆင်နေသည် ။ အခန်းတံခါး ခေါက်သံကြား ရ သဖြင့် ဘော်ဒါ တစ်ကောင်ကောင် မှတ်ပြီး
` တံခါး လော့ခ် မချထားဘူး ၊ ဖွင့်ဝင်ခဲ့ ´
ချိုအီသော မွှေးရနံ့ များ ကို မောင်မောင် ရှူရှိုက်မိသည် ။ ဘယ်ကောင်များ ရေမွှေး ဒီလောက် စွတ်လာတာပါလိမ့် ဟု တွေးမိနေတုန်း ။ မျက်ကွင်း နှစ်ဘက် ကို နူးညံ့သော လက်ဖ၀ါး နှစ်ဘက် က လာပိတ် လာသည် ။ ကျူရှင်အတူတက်သော သူငယ်ချင်း မ တစ်ဦး လား ဟု ထင်မိသည် ။ သို့ သော် မဖြစ်နိုင် ။ မမ ဖြစ်နိုင်သည် ဟု တွေးမိသော် လည်း ဒီလောက်ကြီး ထိ မောင်မောင် မတွေးခဲ့ ။
` ဘယ်သူ လဲ ၊ အခန်းထဲ မှာ ငါတစ်ယောက် ထဲ နော် ၊ ဆရာမ တို့ ရောက်လာရင် မကောင်းဘူး ´
` မောင်မောင် က လည်း ၊ မမ ပါ့ကွယ် ၊ ဘာလဲ…မောင်မောင့် အခန်းထဲ မမ လာလည်လို့ မရဘူး လား ၊ မမ လာလည်တာ မောင်မောင် မကြိုက်ဘူး လား ´
` ဟာ… မကောင်းပါဘူး မမ ရယ် ၊ ဆရာတို့ ဆရာမ တို့ မြင်သွားရင် ကျွန်တော်လည်း မကောင်းဘူး ၊ မမ လည်း မသင့်လျော်ပါဘူး ´
မမ က ပြုံးစိစိ ဖြင့် တံခါး ကို လော့ခ် ချ လိုက်သည် ။ မောင်မောင် တစ်ယောက်လည်း မျက်လုံး ပြူးစွာဖြင့် မမ လုပ်သမျှ လိုက်ကြည့်နေသည် ။ မောင်မောင့် ခေါင်းထဲ တွင်မူ မန်နေဂျာ ကိုကို နှင့် ဘော်ဒါ များ ၏ အပို့ စကားများ က ပြန်လည် ကြားယောင် လာမိသည် ။ မင်း လုပ်စရာ ရှိတာ လုပ် လိုက် ။ ဆော်ကြီး က မင်းကြွေနေတာ ။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ။ လုပ်သာလုပ် ။ အစရှိသဖြင့် ။ မောင်မောင် တစ်ယောက် တစ်ကိုယ်လုံး သွေးတွေ ဆူပူလာသည် ။ ရေတွေ ငတ်လာသည် ။ မမ ၀တ်ထားသည် မှာ စွတ်ကျယ် လေး တစ်ထည် နှင့် အောက်က ချည် ထဘီ ။
မောင်မောင့် ခေါင်းထဲ တွင် စဉ်းစားခြင်း များ လျှပ်စီးကူးသလို လျှင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေသည် ။ မမ က ပြုံးပြုံးကြီး လုပ်ပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် ၀င်ထိုင်လိုက်သည် ။ မောင်မောင့် စိတ်ထဲတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ဝေခွဲရန် ခက်နေသည် ။ နောက်ဆုံးတွင် မောင်မောင် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် မှာ
` ဒီအခြေအနေ ထိ ရောက်မှတော့ ၊ ငါ ဘာမှ မလုပ်ရင် ငါ့ကို ယောက်ျားမပီသ တဲ့ကောင် လို့မမ ထင်သွားတော့မှာပဲ ´
၁၀တန်း ကျူရှင်ပြီးသည် အထိ မမ နှင့် မောင်မောင် ဇါတ်လမ်း ရှိခဲ့သည် ။ မောင်မောင် တို့ ကျူရှင်ဝိုင်း ရှိရာ တည်းခိုခန်း တွင် မမ လာတည်းတိုင်း ။ ၁၀ တန်း အပြီး တွင် မမ ကို အစွဲကြီး စွဲ ခဲ့ မိသူ မောင်မောင့် ခဗျာ မမ ကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်း ပါရစေ ဟု ဆိုလာသည် ။ သို့ သော် မမ က လုံးဝ လက်မခံ ခဲ့ပါ ။ ` ငယ်ရွယ်သူ မို့ စိတ်လှုပ်ရှား တာ ကို မမ နားလည် ပါတယ် ။ မင်း ကို လည်း မမ လက်ထပ် ပေါင်းသင်းဖို့ ဘယ်တုန်းက မှ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး ´ ဟု ဆိုသဖြင့် မောင်မောင် တစ်ယောက် ၀မ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်ရသည် ။ သို့ သော် မောင်မောင် တစ်ယောက် သူ့ ဘ၀ အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာ တွင် တရားဝင် မဟုတ်ခဲ့သည် မိန်းမ ဖြစ်ခဲ့သူ မမ ကို နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက် စကား အဖြစ် ကျေးဇူးတင် စကား ဆိုခဲ့သည် ကို မူ ယခု စာရေးနေသူ့ ကျွန်တော် သိခဲ့ရပါကြောင်း အထက်ပါ ဇါတ်လမ်းလေး ဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ရပါသည် ။
ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က အတူပေါင်းသင်းခဲ့သော အကိုကြီး ၏ ကျွန်တော့် ရှေ့ တွင် ဖြစ်ခဲ့သော သူ ၏ ဇါတ်လမ်း ကို နာမည် များ ပြောင်းလဲ ရေးသားထားပါသည် ။ ထိုအဖြစ်များ ပြီးကတဲ က သူ သင်္ဘော လိုက်သွားပါသည် ။ကမ္ဘာ ပတ်နေပါသည် ။ ယနေ့ ထိ အဆက်အသွယ် လည်း မရပါ ။ အကယ်၍ ကျွန်တော် ယခု တင်သော ပို့ စ်လေးကို ဖတ်မိပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခဲ့မည် ဆိုလျှင် အကိုကြီးကို ကျွန်တော် စောင့်ကြိုနေမည် ဖြစ်ကြောင်း ဤ ပို့ စ်လေး ဖြင့် အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါသည် ။
ကျွန်တော် အခု ရေးတဲ့ ပို့ စ် မှာ စာဖတ်သူ များအတွက် မိုက်ရိုင်းတယ် လို့သတ်မှတ်စရာ စကားလုံး များ ပါရှိခဲ့သော် အနူးအညွတ်တောင်းပန် ပါကြောင်း ။ ပို့ စ်တင်ပြီး မှ ပြန်ပြင်ရန် မလုပ်တတ်ပါသဖြင့် လက်ရှိအတိုင်း ထားလိုက်ရပါသဖြင့် ။ မိုက်ရိုင်းသော အသုံးအနှုံးများ ရှိခဲ့ပါလျှင် အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါကြောင်း ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ။
ခင်ဗျားက မရိုင်းလို့သာတော်တော့တယ် ရွာသူ ဆူးနဲ့ မမ ကတော့ မွတ်မွတ်ညက်ညက်ကြေနေပြီ။ နောက်ဆိုနာမည်၊အသုံးအနှုန်းလေး ရွေးပေးပါဗျာ။
အမျိုးသမီးကအသက်ကြီးပြီး အမျိုးသားက အသက်ငယ်ရင် “မမ”လို့နာမ်စားသုံး ခေါ်တတ်တော့ ထားပါတော့
ဒါကတော. ကျွန်တော်. ထက်တောင်ဆိုသွားသေးတယ်
ကျွန်တော်ကတော. အန်ကယ်ပေါက်ကို တောင်းပန်လို.ကျေအေးသွားပါပြီ
အေးလေ ဆူးဆိုလို့ ဆူးက ဘာတွေမင်းဖြစ်ကုန်တာလဲလို့.. ခေါင်းစဉ်က အဲလိုမတင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ ဒီလိုနေရာမှာ လုပ်ကြံမိုက်ရိုင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေ မတင်သင့်ဘူးလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒါက အများအတွက် ဗဟုသုတ ရတယ်လို့လည်း မမြင်မိပါဘူး။ လူစုံလာဖတ်နေတဲ့နေရာမှာ ဒီပြင်ဇာတ်လမ်းတွေ တင်လို့လည်းရပါတယ်ကွာ…
လုပ်ဇါတ် မဟုတ်ရဘူး ပရိသတ်ကြီးရယ်
ကျွန်တော် က ဆူးနဲ့ အပြင်မှာ မတွေ့ ဖူး ပေမယ့် ဂျီတော့ မှာ တော့ တော်တော် ခင်ပါတယ် ။
အွန်လိုင်းမှာ သူ နဲ့ တွေ့ တိုင်းလဲ စာပေအကြောင်း ၊ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာများအကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ် ။
“ ဆူးပေါ်ဖက်ကျ ဖက်ပေါက် ၊ ဖက်ပေါ်ဆူးကျ ဖက်ပေါက် ” ဆိုတဲ့ စကား ကို ယူပြီး ကျွန်တော့် ပို့ စ် ရဲ့ ခေါင်းစဉ် ကို ပေးခဲ့တာပါ ၊ နေရင်းထိုင်ရင်း ကံကောင်းခဲ့တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက် ကို ဆူး လို့ညွှန်းဆိုချင်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ဟာ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းကောင်လား ၊ တွေ့ ရာကို စော်ကားနေတဲ့ ကောင်လား ဆိုတာ က တော့ ဆူး ကို တိုက်ရိုက်မေးကြည့်ကြပါ ။
နောက်ပြီး တစ်ခု ရှိတာ က ကျွန်တော့် ကို စာဖတ်အား နည်း တယ် လို့ အပြစ်ပြောကြပါ ။ မမ ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ စီနီယာ အမ တစ်ယောက် ရှိတာ ကို ( သူမ ရဲ့ပို့ စ်ကို ဖတ်ဖူးပေမယ့် ) ၊ ဒီ “ ဆူးမင်းဖြစ် ” ပို့ စ်ကို တိုက်ပင်း ရိုက်ချိန်မှာ မမ ဆို တဲ့ နာမည် ကို မသုံးသင့်ကြောင်း မေ့ နေခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော့် ပို့ စ် ထဲ က မမ ဟာ ဂေဇက်ထဲ မှ မမ ကို လုံးဝ ယူသုံးထားတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် လိပ်ပြာသန့် ပါတယ် ။
ကျွန်တော့် ပို့ စ်ဟာ အဖြစ်မှန် တစ်ခု ကို နာမည်ပြောင်း ပြီး ဖတ်လို့ အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် ရေးတတ်သလောက်လေး ရေးတင်ခဲ့တာ ဖြစ်လို့ ။ ပို့ စ် တင်ပြီး ကတည်းက စာဖတ်သူ တစ်ချို့ သိပ်အဆင်မပြေလောက်ဘူး လို့ပဲ ထင်မိခဲ့ လို့ပို့ စ်အောက် မှာ ကွန်မင့် အဖြစ် တောင်းပန် ထားပါသေးတယ် ။
သို့ သော် ယခု လို ဝိုင်းဝန်း ပြောကြ သည် အထိ ဖြစ်လာမယ် လို့ တော့ မထင်ခဲ့ပါ ။
ထပ်ပြီး ပြောလိုသည် မှာ ယခု “ ဆူးမင်းဖြစ် ” ပို့ စ်သည် ၊ ကျွန်တော် ကြုံတွေ့ ခဲ့ဖူးသော သူငယ်ချင်း ၏ “ ဘာမှ မလုပ်ပဲ သူဌေးဖြစ် ခဲ့ခြင်း ” အဖြစ် ကို gazette ဝင် တို့ အပျင်းပြေဖတ်စရာ တစ်ခု အဖြစ် ရေးတတ်သလောက် လေး စာဖွဲ့ ရေးတင် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
gazette ထဲမှာ စီနီယာ ဆူး နှင့် မမ ကို စောင်းမြောင်းတိုက်ခိုင် ရေးသားထားခြင်း မဟုတ်သဖြင့် ကျွန်တော့် လိပ်ပြာ ကျွန်တော် လုံပါကြောင်း ဤ ကွန်မင့် ဖြင့် ပြန်လည် ဖြေရှင်းပါသည် ။
တစ်ခု ဝမ်းသာ မိသည် မှာ ကျွန်တော် ယခု တင်နေသာ ယောက်ျားလေး အသားပေး ဇါတ်လမ်း များ ကို ရွာထဲ ရှိ အမျိုးသမီးများ မဖတ်ခဲ့ဘူး ဟု ထင်မိခဲ့ပါသည် ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။ ပို့ စ် တစ်ခု တင်ပြီး အသေးစိတ် ရှင်းပါဦးမည် ။
*ရိုးသား ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်မှုတိုင်းအတွက်
သင့်အတွက်တော့ အမြဲစိတ်လုံခြုံမှု ရှိနေပါလိမ့်မယ်။*
ကိုပေရဲ့ အပြာရောင် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့…
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာများကွာ..ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်..
မရည်ရွယ်တဲ့ နာမည်နဲ့ ….မထင်တာတွေဖြစ်ခဲ့..
ပို့စ် တစ်ခု ဖြစ်အောင် ကြားဖူး တာလေးတွေ ရေးထားမှန်း သိပါတယ်။ ခေါင်းစဉ် နဲ့တော့ သိပ်မလိုက်ပါဘူး။ ရွာထဲက မန်ဘာတွေ နံမည်နဲ့ ရှုပ်ကုန်လို့ အပုတ်ချတယ် ပြောကုန်ပြီ မဟုတ်လား။ စကားတစ်ချို့က ဆင်ဆာ မလွတ်ဖူးလေ။ ခါးအောက်ပိုင်း စကားတွေ ကို နဲနဲ တော့ ဆင်ခြင်ရေးသင့်တယ်။ ဒါမျိုး က နှစ်ကိုယ်ကြား ပြောရတာ။ လူငယ်ချင်းပြောယင်တောင် ရင်းနှီးသူချင်း ဘဲ ပြောကြတာ။ လူကြား ထဲ ပြောကောင်းတဲ့ စကားတွေ မဟုတ်ဘူးလေ။ အပြောမတတ် တော့ ဆဲသလိုတဲ့ ။ အရေး မတတ်တော့လဲ …
( ရှုပ်ယှက်ခပ်ပြီး ထပ်တစ်လဲလဲ ရှင်းရပြီ ပေါ့ ) … .
သူပြောသလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး .. .လျှောက်ပြောနေတာ ….
အပျို စစ်စစ်တွေ ရမ်းနေတာမှ အများကြီးပဲ
ဖြစ်နိုင်ရင် ဒါမျိုးတွေတော့ ရေးမတင်စေချင်ပါဘူး။
ပညာပေးလည်းမဟုတ် ဘာအတွေးမှလည်း သစ်မလာစေတဲ့ အကြောင်းပါပဲ။
ဇရက်တောင်ပံကျိုးနဲ့ ကြောင်ပေါက်စ၊ကြောင်ခံတွင်းပျက် ဇာတ်တွေကိုတော့ မတင်ပါနဲ့ကွယ်။